Izindaba ze-Android 6.0 Marshmallow | Izindaba zamagajethi
Lezi yizinto ezintsha ezintsha ze-Android 6.0 Marshmallow entsha
I-Android 6.0 Marshmallow Yinguqulo entsha yohlelo lokusebenza lwama-mobiles namathebulethi avela ku-Google ukuthi ezinsukwini ezimbalwa ezedlule nangaphakathi kohlaka lwe-Google I / O 2015 sikwazile ukwazi ngendlela esemthethweni. Uma ngabe uhlobo lokugcina, olubhabhadiswe njengeLollipop, belwakhiwa kabusha okukhulu ngokufika kwe-Material Design, kule nguqulo entsha singasho ukuthi ukufakwa kwemisebenzi emisha nezinketho kuthathe kuqala, ngama-tweaks amancane ambalwa ngokwakhiwa. .
Namuhla futhi ngale ndatshana sizokwenza okubanzi ukubuyekezwa kwezindaba ezibaluleke kakhulu esizothola ku-Android 6.0. Vele, ngeshwa okwamanje ngeke sikwazi ukuyihlola futhi siyisebenzise ngokugcwele, ngaphandle uma sinenye yezisetshenziswa ze-Nexus ehambisana nenguqulo entsha yesoftware ethandwayo.
3 "Manje ku-Tap", umsebenzi omusha we-Google Now
4 Ukuzimela okuthuthukisiwe, i-USB-C neDoze
5 Ukuphepha okwengeziwe nokulawulwa okuningi kuzinhlelo zokusebenza
6 Abafundi bezinhlamvu zeminwe sebesekelwa ngokwendabuko
Yize izinto ezintsha ngokwendlela yokuklama aziziningi kakhulu njengoba sishilo phambilini, sizothola okushaya amanzi impela. Okokuqala sizobona a idrowa entsha yohlelo lokusebenza ezokhombisa kuqala umugqa ngezicelo ezisetshenziswe kakhulu. Ngaphezu kwalokho, ukunyakaza kwayo ngeke kube kwesobunxele noma kwesokudla, kepha kuye phezulu noma phansi.
Uma kwenzeka lezi zindaba ebhokisini lesicelo zibonakala zimbalwa kuwe, sizothola, kube lula, ukuthi izinhlelo zihlelwe ngokwe-alfabhethi, ingilazi yokukhulisa ukwazi ukusesha izinhlelo zokusebenza ngokushesha nohlu olunazo zonke izinhlamvu zamagama ukuthola izicelo eziqala ngohlamvu ngalunye ngendlela esheshayo.
Olunye ushintsho olungabalulekile yi ukuhlela kabusha uhlu lwamawijethi lokho manje kuvela ukuqoqwa ngohlelo lokusebenza noma kungenzeka ukufinyelela imiyalo yezwi kusuka kusikrini sokukhiya.
Akungabazeki ukuthi enye yezinto ezintsha ezivezwa yile nguqulo entsha ye-Android ukufika kwayo kwe Android Pay kudivayisi yethu. Le nsizakalo yokukhokha ye-Google izosebenza ncamashi njengezinye esezivele zitholakala emakethe, isebenzisa ubuchwepheshe be-NFC futhi inikeze abasebenzisi inketho ethokozisayo lapho benza zonke izinhlobo zokukhokha.
Yize i-Android Pay ivela esandleni se-Android 6.0 this Izosebenza nezinye izinhlobo zesoftware, ikakhulukazi futhi njengoba iGoogle imemezele ngezinguqulo eziphakeme kune-Android KitKat. Vele, ngeshwa kuzofanele silinde isikhashana ukuze amazwe angaphandle kwe-United States afike.
Ngokuqondile kulelo zwe sesivele sazi ukuthi noma imuphi umsebenzisi angagcina amakhadi we-Visa, MasterCard, American Express ne-Discover, ngenkathi i-AT & T, T-Mobile neVerizon kuzoba ngabasebenza opharetha ababamba iqhaza, abalinde abanye abaningi ukuthi bathathe isinqumo sokuziphonsa.
"Manje ku-Tap", umsebenzi omusha we-Google Now
I-Google Now ingumsizi wezwi we-Google, otholakala emhlabeni wonke ku-Android nalapho noma yimuphi umsebenzisi angacela ulwazi oluthile kuye. Ngaphezu kwalokho, uma siyilungisa kahle, ingakhombisa imininingwane ethokozisayo ngokuzenzakalela.
Lesi sikhondlakhondla sifuna umsizi waso wezwi angabi ngaphezu komsizi nje olula futhi kulokhu sinqume ukusenza sihlakaniphe ngokwengeziwe. Ngenxa yomsebenzi omusha obizwa ngokuthi "Manje kuthepha" lokhu kuzoba njalo ngikwazi ukusesha imininingwane ephathelene nalokhu okufundayo ngokwesibonelo ikhasi lewebhu noma lokho okukhulunywa ngakho engxoxweni.
Phakathi kokukhethwa kukho okusha esingakujabulela ukuthola imininingwane cishe nganoma yini ngendlela elula. Uma ngokwesibonelo sifunda i-imeyili, singathola imininingwane ethe xaxa mayelana nendawo yokudlela eshiwo ngokucindezela nokubamba inkinobho yokuqala. I-Google Now izosikhombisa ngokushesha amakhadi olwazi ahlobene naleyo ndawo yokudlela.
Ngaphezu kwalokho, nokuvala izinketho ezinikezwa yilo msebenzi omusha we-Google Now, singakusebenzisa ngaphakathi kwezinhlelo zokusebenza ezinjengeSpotify futhi usitshele igama lomculi wengoma ethile noma ukuthi ngeyiphi i-albhamu.
Ukuzimela okuthuthukisiwe, i-USB-C neDoze
Eziningi zezikhalazo ezithi abasebenzisi ngamadivayisi wabo weselula zihlobene nebhethri nokuthi bazi kuGoogle. I-Android 6.0 izoshaya kakhulu emakethe izinketho zokwelula impilo yebhethri phakathi kwemodi yeDoze evelele, okuyizinzwa ezinyakazayo ezahlukahlukene ezizovumela i-smartphone noma ithebhulethi ukuthi ithole ukuthi ingabe iyasetshenziswa noma cha. Uma ingasetshenziswa, izokwenza kungasebenzi izinqubo ezithile futhi iphinde ivale ezinye izinhlelo zokusebenza ezingadingi ukuthi zigcinwe zivulekile ngaleso sikhathi.
Enye into entsha esingayibona kuzoba ukuhambisana kwe- I-USB-C noma i-USB Type C lokho kuzosivumela ukuthi sixhume ikhebula lokushaja le-USB kunoma yisiphi isikhundla. Amacala azophinda futhi asheshe aphindwe kane kunamanje.
Ukuphepha okwengeziwe nokulawulwa okuningi kuzinhlelo zokusebenza
Singasho ngokuphepha ukuthi i-Android isivele iyisistimu yokusebenza ephephe kakhulu, kepha iGoogle ifuna ukuya phambili futhi ngale nguqulo entsha bafuna i-Android 6.0 iphephe kakhulu futhi futhi sivumele ukuthi sikwazi ukulawula kakhulu izinhlelo esizifakayo ezicini zokuphepha.
Kukho konke lokhu, lapho sifaka isicelo kunguqulo entsha ye-Android, ngeke siwubone umlayezo ojwayelekile wemvume, esiwamukela sonke ngaphandle kokunaka kakhulu, kepha lezi zimvume zizocelwa kubasebenzisi njalo lapho zidingeka.
Lokhu kuzosivumela, ngokwesibonelo, ukususa ukufinyelela endaweni yezinye izinhlelo zokusebenza esingaziboni zidinga ukuba nazo.
Abafundi bezinhlamvu zeminwe sebesekelwa ngokwendabuko
Amanye amadivayisi eselula avela ku-Samsung, i-HTC noma i-Huawei asevele ehlanganise abafundi bezinhlamvu zeminwe abangasetshenziselwa izinhloso ezahlukahlukene, kepha kusukela manje kuqhubeke nokufika kwe-Android 6.0 entsha, laba bafundi bazohambisana ngokwendabuko nesoftware, Okungangabazeki ukuthi kuzoba yinzuzo enkulu kubo bonke abakhiqizi.
Phakathi kwezinye izinto, le nto entsha izosivumela ukuthi siye kumatheminali amaningi sinabafundi bezinhlamvu zeminwe futhi nokuthi lezi ziyasetshenziswa, ngokwesibonelo, ukuhlinzeka ngokuphepha okukhulu uma kungenzeka kuma-smartphone kanye namathebulethi.
Uma usuvele ufake futhi wahlola i-Android 6.0 Marshmallow, uzokwazi ngokuphelele ukuthi akulona ushintsho olukhulu ezingeni elibukwayo, ikakhulukazi njengoba i-Android 5.0 Lollipop yenzile. Lapho ngiyifaka kudivayisi yami ye-Nexus, ngaphoxeka kancane ngoba ngangilindele izinguquko eziningi ezingeni lobuhle nokwakhiwa kunalokhu umuntu akuthola kamuva.
Lapho lokho kudana okuncane kuphelile, umuntu uyabona ukuthi le nguqulo ye-Android inikeza inani elikhulu lemisebenzi emisha nejabulisayo nezinketho. Ngaphezu kwalokho, ngithathe isiphetho sokuthi sibhekene ne-Android 5.0 evuthiwe futhi sikulungele ukuba ngomunye we-Android enhle kakhulu esesiyibonile, yize banqume ukushintsha igama libe yi-Android 6.0 Marshmallow.
Ucabangani ngezindaba eziyinhloko esingazibona ku-Android 6.0 entsha nokuthi sibuyekeze kanjani kule ndatshana?. Ungasinika umbono wakho esikhaleni esibekelwe ukuphawula ngale ndatshana noma nganoma yimaphi amanethiwekhi omphakathi esikhona kuwo.
Indlela ephelele ye-athikili: Izindaba zamagajethi » I-Telephony » AmaSelula » Lezi yizinto ezintsha ezintsha ze-Android 6.0 Marshmallow entsha
omhlophe osorio tapia kusho
Isebenzela umthala we-samsung 4
Phendula ku-blanca osorio tapia
Lawa ngamagajethi ama-5 amahle kakhulu esiwabonile ku-IFA
Ungazilayisha kanjani izithombe ku-Instagram kusuka ku-Chrome